Adequacy of interfac - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: adequacy of interface requirement for te... (İngilizce - Birmanca)
this is so that, if someone on the flight turns out to be infected, the authorities can track down the people who were sitting near them for testing or quarantine.
သို့မှသာ လေယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူ တစ်ယောက်ယောက် ကူးစက်ခြင်းခံထားရသည်ကို တွေ့ရှိရပါက အာဏာပိုင်များမှ ၎င်းတို့အနီးတွင်ထိုင်သောသူများကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် အသွားအလာကန့်သတ်ရန်အတွက် ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
in addition, the requirements for successful host switches and the implications of virus evolution on disease severity are also highlighted.
ထို့အပြင် လက်ခံကောင် တစ်ကောင်မှ တစ်ကောင် အောင်မြင်စွာ ကူးစက်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုပေါ်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု၏ ဂယက်ရိုက်မှုများကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်။
in some cases it may simply not be possible, even if you're healthy and meet the legal requirements for entry.
အချို့အခြေအနေများတွင် ဝင်ရောက်မှုအတွက် သင်သည် ကျန်းမာနေပြီး ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနေလျှင်ပင် ထိုသို့ ရိုးရှင်းစွာ ဝင်ရောက်ရန်မှာ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
on 16 march, the world health organization called for ramping up the testing programmes as the best way to slow the advance of covid-19 pandemic.high demand for testing due to wide spread of the virus caused backlogs of hundreds of thousands of tests at private u.s. labs, and supplies of swabs and chemical reagents became strained.
မတ်လ 16 ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့က covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ တိုးပွားမှုကို နှေးကွေးစေရန် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းအဖြစ် စမ်းသပ်မှု အစီအစဉ်များကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန့်ပွားနေခြင်းကြောင့် စမ်းသပ်မှု လိုလားချက် မြင့်မားနေခြင်းသည် အမေရိကန် ပုဂ္ဂလိက ဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် စမ်းသပ်မှုများ သိန်းနှင့် ချီ စုပုံနေစေပြီး လိုအပ်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတုဗေဒ ဓါတ်ပြုပစ္စည်းများ ပြတ်တောက်သွားစေသည်။
the german recipe was published on 17 january 2020; the protocol developed by the united states centers for disease control was not available until 28 january, delaying available tests in the u.s.china and the united states had problems with the reliability of test kits early in the outbreak, and these countries and australia were unable to supply enough kits to satisfy demand and recommendations for testing by health experts.
ဂျာမန် ဆေးဝါးပေါင်းစပ်မှုကို 2020 ခုနှစ် ဇန္နဝါရီ 17 ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာများ က အမေရိကန်တွင် စမ်းသပ်မှုများ ရရှိနိုင်မှု နှောင့်နှေးခဲ့ပြီး ဇန္နဝါရီ 28 ရက်အထိ ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အစောပိုင်းတွင် တရုတ်နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့သည် စမ်းသပ်မှု ပစ္စည်း အစုံများ၏ ယုံကြည်နိုင်မှုအပေါ် ပြဿနာများ ရှိခဲ့ကြပြီး ထိုနိုင်ငံများနှင့် ဩစတေးလျား တို့သည် လိုအပ်ချက် ပြည့်မီသည် အထိ စမ်းသပ်မှု ပစ္စည်းများနှင့် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များက ထောက်ခံချက်ပေးသော စမ်းသပ်မှုများကို လုံလောက်အောင် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
the key requirements for this release were the ability to code (table 4)acase of covid-19, exposure to risk of infection (travel to an area where there may beahigher risk), contact with anyone infected with covid-19,areport thataperson had been tested for covid-19, and that the disease had been excluded (likelyanegative test).
ဤထုတ်ပြန်ချက်၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များသည် ကူးစက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ထိတွေ့မှုရှိဖူး (ကူးစက်မှုအန္တရာယ် ပိုမိုမြင့်မားသည့် ဒေသတစ်ခုခုသို့ ခရီးသွားဖူးသည်) ပြီး၊ covid-19 ကူးစက်ခံထားရသူ တစ်ဦးဦးနှင့် ထိတွေ့ဖူးပြီး covid-19 အတွက် စစ်ဆေးထားကာ ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးသည့် (ပိုးမတွေ့သည့် စစ်ဆေးမှုတို့ကဲ့သို့) ဖြစ်စဉ်များရှိနေသည့် covid-19 လူနာများကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် စည်းမျဉ်း (ဇယား 4) ဖြစ်သည်။
get well soon dear self (İngilizce>Malayca)बहुत ही जबरदस्त (Hintçe>İngilizce)natha gulla in english (Telugu>İngilizce)distortions (Fince>İngilizce)wafahamu (Svahili>İngilizce)hicham guerrouj (Macarca>İngilizce)boch (Danca>Almanca)to take part in this survey (İngilizce>Tagalogca)generated by4visitors book (İtalyanca>İngilizce)desi सेक्सी वीडियो bf (İngilizce>Hintçe)irriservat (Maltaca>İngilizce)用经济改革带动社会改革 (Çince (Modern)>İngilizce)ex (Fransızca>Çince (Modern))ananizi (Türkçe>İngilizce)parce que ill est antipathique (Fransızca>İngilizce)eigenhandig overhandigen (Hollandaca>Fransızca)abonohan ang pera (Tagalogca>İngilizce)kerancakan pembangunan (Malayca>İngilizce)arvonlisäverojärjestelmästä (Danca>Almanca)благовествования (Rusça>İbranice)ilokano to tagalog translate (İngilizce>Tagalogca)membawa haluan masing masing (Malayca>İngilizce)siempre me confundo (İspanyolca>İngilizce)